musha Europe Vatambi veBasketball Giannis Antetokounmpo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara ye NBA Genius nezita rekuti "ChiGiriki Chirevo". Yedu Giannis Antetokounmpo Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ongororo yacho inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga / hwemhuri, dzidzo / basa rake rekuvaka, hupenyu hwebasa repakutanga, iyo nzira yeku mukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwega, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti aive NBA Anonyanya Kukoshesa Player we2019. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Giannis Antetokounmpo's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Giannis Antetokounmpo Nyaya Yevechidiki:
Kutanga kuenda, mazita ake ekuzvarwa akazara aakapihwa nevabereki vake ndiGiannis Sina Ougko Adetokunbo. Giannis Antetokounmpo akazvarwa pazuva re6th raDecember 1994 kuna Amai vake, Veronica Antetokounmpo uye baba vanononoka, Charles Antetokounmpo muguta reAthens, Greece. Sangana naGiannis Antetokounmpo vabereki vakabereka vanakomana vashanu naGiannis ari wepakati mwana.
Waizviziva here? Giannis Antetokounmpo ane mhuri yake anobva kuNigeria. Baba vake vanopera Charles vanokudza kubva kuSouth Western chikamu cheNigeria apo mai vake Veronica vanobva kumabvazuva kwenyika. Vaviri Charles naVeronica mu1991 vakasarudza kubva kuNigeria kuenda kuGreek vaine tarisiro yekuchengetedza ramangwana riri nani ivo nevana vavo. Vakasiya mwanakomana wavo wekutanga anonzi Francis, uyo akagara nababamukuru vake asati ajoina ivo makore gare gare.
Vabereki vaGiannis Antetokounmpo pavakasvika Greece vakanetseka kuwana basa. Gare gare, baba vake vanononoka Charles vakatanga kushanda sevabati (munhu ane hunyanzvi pane dzakasiyana siyana dzekugadzirisa, kazhinji akatenderedza imba) iye amai vake Veronica vakawana basa rekuchengeta vana iro ivo vaviri vaishandisa kuraramisa mhuri. Makanga muri muGrisi umo Veronica akazvara mukoma mukuru waGianni Thanasis, iye, munin'ina wake wepedyo Kostas uye mudiki wemhuri, Alex.
Giannis Antetokounmpo akakurira pamwe chete nevakoma vake vatatu mumhuri yepasi-yepakati-yemhuri kumashure yaishandiswa nevabereki vake vaishanda nesimba. Semwanakomana wevabereki vekune dzimwe nyika, hupenyu hwaisave nyore maari hopey vavakidzani yeSepolia, Greece. Pakutanga, hama dzese dzakabatsira vabereki vavo kutengesa wachi, mabhegi, uye magirazi kuitira kuti vawane mari.
Giannis Antetokounmpo Dzidzo uye Basa Kuvaka:
Giannis Antetokounmpo kunyangwe aine midzi yemhuri yeNigeria, akakurira achitora tsika yechiGreek uye achidzidza mutauro achiri kuchikoro. Vabereki vake vakaitawo basa rakakosha kuti vave nechokwadi chekudzidzisa vana vavo kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana dzekudyidzana.
Kana zvasvika pakusarudza mutambo, Giannis nehama dzake vakasarudza kutamba basketball, chiitiko icho iye chaakatanga pazera re7. Ivo vaviri Giannis uye mukoma wake wepedyo mukoma Thanasis vaive padyo kwazvo vaiziva kuti vane tarenda uye vanogona kugadzira chimwe chinhu kubva kubhasikiti. Yakanga iri tarenda yavaiziva kana ikasungwa, yaisimudzira mamiriro emari yemhuri yavo.
As TheFamousPeople akaisa, dzimwe nguva, Giannis naHangasis vaitamba mutambo mudumbu-repedyo risina chinhu zvese muzita ra kupfuudza mamakisi avo uye kumhanyisa kumhanya kuti vamwe vazoteedzere. Mukumuka kwe2009, Giannis ave kurairidzwa nenhengo dzemhuri akafunga kutanga kunyoresa kuongororwa basketball. Kuzvishingisa kwenhengo dzemhuri yake hakuna anoziva miganhu when akabatidzira kushevedza kwake kwekutanga kuti aende kunopedzwa bhasiketi paFilathlitikos, imwe nyanzvi yechiGreek basketball kirabhu iri muZografou, Atene, Greece.
Giannis Antetokounmpo Kurarama Kwepakutanga Hupenyu:
Sepola, iro guta reGreek raakakurira maaive ari 26 maminetsi kure nekirabhu yake nyowani Filathlitikos. Kuda kwaGiannis kwe basketball kwakamuona achidarika miedzo nemavara anobhururuka uye achizvinyoresa pachikwata chevechidiki setup. Giannis akakurumidza kuita fungidziro nechikwata sezvaakakura nemumatanho, achibatsira divi rake kuhwina zvigadziri zvakawanda.
Waizviziva here?… Mumutambo mumwe chete, chiGiriki Freek chakaburitsa makumi mashanu emapoinzi, chiitiko chakamuona achitanga kukwezva maziso akatarisa e basketball scout kuEurope nekuUnited States.
VERENGA Luka Doncic Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Giannis Antetokounmpo Nzira Inoenda Mukurumbira Nyaya:
Muna 2011, Antetokounmpo zviroto zvekuve mukuru basketball mutambi akazadzikiswa. Akakwidziridzwa kuchikwata chevakuru cheFilathlitikos uko kwaakaramba achitonga mutambo, zvichiita kuti kuda kwake kuve basa rake. Mugore ra2012, anga atove yakashanduka kuita yakachinja-chinja, yakawedzera kukwezva Spanish top-tier basketball kirabhu 'CAI Zaragoza' ndiani chibvumirano naye chemakore 4 ku € 4million pagore.
Giannis haana kuwana mukana wekutamba Zaragoza sezvo akazotorwa naMilwaukee Bucks, kirabhu yebhasiketi yeUnited States uyo aifanira kukumbira pamabvi avo kuti asainise. Sezvo chibvumirano chake naZaragoza chakabatanidzwa nemamiriro ezvinhu ekutiza, Giannis akakodzera kutiza aziva kuti kutamba muNBA ndiko kudenga kwemutambo webhasikiti.
Giannis Antetokounmpo Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Giannis akaita yake NBA kutanga pa Gumiguru 13, 2013, pazera ramakore gumi nemasere, mazuva 18. Iyo yekutanga kumuita mumwe wevadiki veNBA vatambi kuti akwanise kuita izvo. Pakupera kwemwaka iwo, akatumidzwa zita raive mu 311-2013 NBA All-Rookie yechipiri timu. Rchero zvikaita kuparara, iyo NBA Star yakaramba ichikura kubva pasimba pasimba, ichiwana hukuriso pazera diki.
Pazera diki remakore makumi maviri nemaviri nemazuva makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa, Giannis akazove mutambi mudiki munhoroondo yeNBA kutanga muAll-Star Game. Mugore ra22, akazove mutambi weNBA akanyanya kuvandudzwa pamwe chete nemamwe makwikwi akatevera.
Nekudaro, mune ese marumbidziro aGiannis, iyo nguva-yekuvhundutsa iri mune basa yakauya paNBA yekupera-kwemwaka mwaka mibairo usiku kwaakatumidzwa zita rekuti Mutambi Anonyanya Kukoshesa muligi we2019. Mubairo uyu wakauya mushure mekunge abata muEuroscar European Player yegore rapfuura (2018).
Pasina mubvunzo, iyo-yakawanda-yekuhwina mubairo NBA all-nyeredzi yakauya kure kubva kutengesa magirazi uye maDVD mumigwagwa yeAthens, Greece. Senge panguva yekunyora, iye anoonekwa semhando yepamusoro pakati pekusaguma kugadzira mutsara weNBA nyeredzi kuve nekubuda muEurope ne Africa. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Giannis Antetokounmpo Hukama Hupenyu Chokwadi:
Nekukwira kwake mukurumbira mukuvhenekera kwe basketball, zvine chokwadi kuti vateveri veNBA vanofanirwa kunge vakabvunza kana Giannis Antetokounmpo aine musikana. Asides chinzvimbo chake chemukurumbira, hapana chinoramba chokwadi chekuti chitarisiko chake chakanakidzwa pamwe nehunhu hwake uye maitiro ekutamba hazvingamuise pamusoro pevakadzi vazhinji mukomana waanoda rondedzero.
Nekudaro, shure kweye yakabudirira NBA nyeredzi, kune aripo sepane nguva yekunyora, musikana akanaka kumeso mune akanaka murume waMaria Riddlesprigger.
Kunge mukomana wake wemitambo, Mariah ari kuitawo zvemitambo. Iye mutambi weAmerica uyo panguva yekunyora anotamba volleyball kuRice University. Sekureva kwenyaya yake yeLinkedin, akapedza degree reBachelor mune zvemitambo manejimendi kubva kuRice University mugore ra2014. Baba vaMariah Pat Riddlesprigger vaive ex-basketballer vaitambira Fresno State University mukunopera '80s uye kutanga' 90s.
Vaviri vadikani vagara vachionekwa pamwe chete vachinyatsobatana kune mumwe nemumwe pane akati wandei uye zvinoita sekunge vakawana rudo mumaoko eumwe neumwe mafeni tariro yekuguma kunofadza (muchato) kwavari.
Hazvina kunyatsojeka kuti Giannis naMariah vakatanga kusangana riini, asi vanga vari murudo rweanodarika makore maviri kubva panguva yekunyora. Vaviri vacho vanogara kuMilwaukee pamwe chete uye vanowanzo kutumirana nezveumwe neumwe wavo mumatare enhau enhau.
Sekureva kweGreekCityFans, Mucheche 'Greek Freak' parizvino ari munzira sezvo Giannis naMariah vachizivisa musi wa 12 Gumiguru 2019 kuti vari kutarisira mwana wavo wekutanga uyo achazove nhengo nyowani yemhuri yeMilwaukee Bucks.
Giannis Antetokounmpo Hupenyu hwechokwadi:
Kuziva Giannis Antetokounmpo Hupenyu hwega Hari kure nemabasa ake padare rebhasikiti kwaizokubatsira kuti uwane mufananidzo uri nani wehunhu hwake.
Kutanga kuenda, kana uchinge wasangana nechiGreek Freek kekutanga, iwe uchaona kuti ane pfungwa dzakavhurika uye anofara kwazvo. Semunhu anotapurika, ane tarisiro, anofarira uye anokwanisa kushandura pfungwa dzake kuita zviito zvekongiri, achiita chero chinhu kuzadzisa zvinangwa zvake.
Kunze kuri kutamba basketball, Giannis anoda kuteerera mimhanzi yaJ. Cole, Kendrick Lamar, Big Sean, uye Drake. Asi waanoda kupfuura vese ndiJ.Cole. Ari kufunga kunyora Hip-hop uye R&B Mimhanzi sechivaraidzo chingangoitika mushure mekurega basa.
Giannis Antetokounmpo Hupenyu hwemhuri:
Kutanga, isu tinoda kuti iwe uzive kuti iyo Giannis Antetokounmpo mhuri zita raidaidzwa pakutanga 'Adetokunbo '. Zita "Adetokunbo”Izita reYoruba mavambo (Maodzanyemba akadziva kumadokero Nigeria) zvinoreva kuti" mambo / korona / humambo kubva mhiri kwemakungwa ".
Waizviziva here?… Zita 'Antetokounmpo ' yakanamatira mundangariro dzemunhu wese zvese nekutenda kuGreek Passport Official uyo akanyora zvisizvo zita rababa vake. Nekudaro, kwemakore ekutanga gumi nemasere ehupenyu hwake, Antetokounmpo akange asina huwandu, asina mapepa kubva kuNigeria kana Girisi. Muchikamu chino, tinokupa rumwe ruzivo nezve nhengo dzemhuri yake.
Nezve baba vaGiannis Antetokounmpo: Late Charles Antetokounmpo aimbova mutambi wenhabvu wekuNigeria akaberekwa musi we3 waNyamavhuvhu 1964. Semunhu wezvemitambo, akapfuudza majini kuvanakomana vake kusanganisira Giannis mudiki.
Charles Antetokounmpo akatama kubva kuGreece kuenda kuMilwaukee mu2013 aine mudzimai wake nevanakomana vaviri vechidiki. Zvinosuruvarisa, haana kumbogara munyika kwenguva yakareba kwazvo kuti afarire michero yebasa rake. Pazuva re29th raSeptember 2017, iyo Giannis Antetokounmpo mhuri yakapupurira zuva rinosiririsa vehupenyu hwavo. Raive zuva rakafa baba vake mushure mekurwara kwemoyo kwakaitika kumba kwake kuMilukeukee, kuWisccin.
Nezve amai vaGiannis Antetokounmpo: Amai vaGiannis Antetokounmpo, Veronica Antetokounmpo aimbova jumper yepamusoro yeNigerian. Iye Igbo nerudzi. Vese vana vaVeronica vanozivikanwa kuti vakagarawo nhaka magene emitambo asi zvirokwazvo kwete kukwirira.
Thanasis Antetokounmpo Hama: Giannis ane vakoma makumi mana, vaviri vakuru vaFrancis uye Thanasis uye vadiki vaviri vanoenda nemazita Kostas naAlex. Kukura, hama dzeAntetokounmpo vese vaive neruzivo rwakadzama rwekuve nevhu rakafanana iro ivo vese vakawana mune basketball.
Chokwadi Pamusoro Thanasis Antetokounmpo: Mukoma waGianni mukuru Thanasis zvakare inyanzvi bhasiketi (Mudiki kumberi). Mwanakomana wechipiri wemhuri yeAntetokounmpo akazvarwa pazuva re18th raJuly 1992, zvichimuita makore maviri nehafu akura kupfuura wechiGriki Freak.
Kungofanana nemunin’ina wake, Thanasis akatangawo kutamba vechidikilublabhu basketball nezvikwata zvejunior zveFilathlitikos. Kubva zvaJuly 16, 2019, Thanasis isayinwa naMilwaukee Bucks, achibatanidzwazve nemukoma wake Giannis.
Chokwadi pamusoro Kostas Antetokounmpo: Zita rake rizere ane musanganiswa weIgbo (kumabvazuva kweNigerian mavambo) sezita repakati rinotenda kuna mai vake. Kostas Ndubuisi Antetokounmpo, munun'una wepedyo waGiannis akaberekwa pane 20th yaNovember 1997 uye ane makore matatu ari mudiki pane mukoma wake.
Jkufanana nevakoma vake vakuru, iye akateedzerawo basa mu basketball. Kostas mushure mekusekondari akaenderera mberi nekutamba koreji basketball paYunivhesiti yeDayton. Anotamba zvese zviri zviviri zvidiki uye simba kumberi kwePhiladelphia 76ers, timu yehunyanzvi yeAmerican basketball yakavakirwa muPhiladelphia metropolitan nzvimbo.
Chokwadi pamusoro Alex Antetokounmpo: Gianni munin'ina wemukoma Alex akazvarwa Nyamavhuvhu 26, 2001 ichimuita makore manomwe mudiki kuna Giannis. Kungofanana nevakoma vake, Alexis akawana dzidzo yake yekutanga kubva kuzvikoro zveGreek. Nepo dzimwe hama dzake nhatu dzakatungamira nemuenzaniso mumabasa avo ebasketball, Alex akatevera.
Chokwadi pamusoro Francis Antetokounmpo: Mukoma mukuru waGianni anoenda anonzi Francis. Ndiye chete mukoma Antetokounmpo uyo asina kuzvarwa kuGreece. Francis akaberekerwa muNigeria mugore ra1988.Vabereki vavo pavakabva kuNigeria vachienda kuGirisi muna 1991, akasara kumashure nasekuru nasekuru vake kwemakore mashoma asati aenda kuGreece kunogara nevamwe vese vemhuri.
Giannis Antetokounmpo Mararamiro:
Sezvo ye2019, iyo Bucks nyeredzi ine huwandu hunofungidzirwa hwemadhora mazana mana emadhora 40. Iye Mari, maBhonasi, zvinoshamisa endorsement zviitiko ndiye sosi yake huru yemari. Kuita akawanda akayambukira kurarama hupenyu hwekunze hunotaridzika nyore nenzvimbo yake huru uye mota dzinotsvedza.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mararamiro aGiannis Antetokounmpo akatanga pane yakaderera katsamba sekutanga kwake kwekuzvininipisa. Maererano ne ThePostGame, akambogara mune imwe imba yairenda imba mbiri dzavaigara nemusikana wake, amai nemunun'una wavo.
Giannis Antetokounmpo Chokwadi:
Maoko Ake: Ruoko rwaGiannis Antetokounmpo (zvanza neminwe) akareba gumi nemaviri inches. Wanga uchiziva here? LeBron James.
Wanga uchiziva here?… Ruoko rwaGiannis Antetokounmpo (chanza neminwe) ingori 0.75 inches pakureba pane murume ane maoko akakurisa, Robert Pershing Wadlow ane maoko akayera 32.3 cm (12.75 mu) (Guinness World Record Report).
Basa remauto: Iyo Giannis Antetokounmpo yekutengeserana kwemhuri haisi chete basketball. Waizviziva here? Vaviri Giannis nemunin'ina wake Thanasis vakatora mazuva mashoma ebasa reMasoja kuGreek kutenderedza Chikunguru we2016.
Raive basa rinosungirwa muchiuto reGreek inova tsika kune chero mugari wechiGreek anogara zvachose mhiri kwemakungwa. Nekuti vaive vatambi vane hunyanzvi, vaisafanirwa kuzadzikisa basa rekumanikidzwa remwedzi mitatu.
Kukudzwa kwake Muchidimbu: Vazhinji vateveri vebhasikiti vakangoziva Giannis paakabata iyo NBA yakakosha mutambi mubayiro. Nekudaro, kubvira rake rehunyanzvi NBA basa rakatanga mu2014, Giannis akahwina mibairo yakati wandei nezvaakaita. Pazasi pane rondedzero yavo kubva munaGumiguru 2019.
Giannis Antetokounmpo Chitendero: Vabereki vaGiannis Antetokounmpo vakarera vana vavo mumusha wechiKristu. Nhengo zhinji dzemhuri dzakabhabhatidzirwa muChechi yeGreek Orthodox inova chechi yechipiri pakukura yevaKristu, ine nhengo dzinenge mazana maviri nemakumi maviri nemazana akabhabhatidzwa. Giannis nemunin'ina wake Alex vakabhabhatidzwa musi wa 260 Gumiguru 28.
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nekuverenga yedu Giannis Antetokounmpo Yemwana Nhau uye untold biography chokwadi. Pahudiki biography, isu tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana kuti utibate!